म इन्स्टाग्राम मा फोटो अपलोड गर्न सक्दिन: यो लोड रहन्छ, के गर्ने? | मोबाइल फोरम
म इन्स्टाग्राम मा फोटो अपलोड गर्न सक्दिन: यो लोड रहन्छ, के गर्ने?
इग्नासियो साला | 15/09/2021 12:00 | इन्स्टाग्राम, सामाजिक सञ्जालहरू
सामाजिक सञ्जाल, राम्रो को लागी वा नराम्रो को लागी, बनीएको छ लाखौं मानिसहरुको लागी प्रवक्ता कि, अन्यथा, उनीहरु आफैलाई अभिव्यक्त गर्ने कुनै तरिका छैन। एक तरफ छोडेर कि केहि प्रयोगकर्ताहरु विवाद उत्पन्न गर्न को लागी अन्य प्रयोगकर्ताहरुको ध्यान कब्जा गर्न को लागी, जब यो सही ढंगले काम गर्दैन धेरै धेरै नर्भस हुन्छन्।
इन्स्टाग्राम, कुनै पनी अन्य अनलाइन प्लेटफर्म जस्तै, तपाइँ एक इन्टरनेट जडान को आवश्यकता छ, किनकि सामग्री स्थानीय उपकरण मा कहिल्यै भण्डारण गरीएको छैन। जे होस्, यो कहिले काहिँ यो गर्न को रूप मा काम गर्न सक्दैन। के हुन्छ जब म इन्स्टाग्राममा फोटो अपलोड गर्न सक्दिन?
समस्या को समाधान म इन्स्टाग्राम मा फोटो अपलोड गर्न सक्दिन धेरै कारकहरु मा निर्भर गर्दछ। यदि तपाइँ यो समस्या को समाधान को लागी जान्न चाहानुहुन्छ, म तपाइँलाई पढ्न जारी राख्न आमन्त्रित गर्दछु।
1 इन्स्टाग्राम तल छ
2 हामीसँग इन्टरनेट जडान छैन
3 इन्टरनेट जडान गरीब छ
4 बन्द र आवेदन फेरि खोल्नुहोस्
5 नवीनतम संस्करण को लागी आवेदन अपडेट गर्नुहोस्
6 क्यास खाली गर्नुहोस्
7 वेब संस्करण प्रयोग गर्नुहोस्
8 उपकरण पुनः सुरु गर्नुहोस्
इन्स्टाग्राम तल छ
पहिलो कुरा हामीले गर्नु पर्छ जब हामी इन्स्टाग्राम मा फोटो प्रकाशित गर्न सक्दैनौं कि छैन जाँच गर्न को लागी इन्स्टाग्राम तल छ। सबैभन्दा छिटो विधि जाँच गर्नुहोस् कि इन्स्टाग्राम सर्भर डाउन छन् यो वेब को माध्यम बाट छ तल डिटेक्टर.
यस पृष्ठ को माध्यम बाट, हामी जान्न सक्छौं प्रयोगकर्ताहरु द्वारा रिपोर्ट घटनाहरु को संख्या पछिल्लो २४ घण्टामा। ग्राफ को माध्यम बाट यो हामीलाई देखाउँछ, हामी छिटो जान्न सक्छौं यदि प्लेटफर्म को सर्वरहरु तल छन्।
यदि ग्राफ त्यो समयमा घटनाहरु को एक ठूलो संख्या देखाउँछ, केवल एक चीज हामी गर्न सक्छौं समस्या को समाधान को लागी पर्खनु हो। लाई यो प्लेटफर्म इन्टरनेट जडान बिना काम गर्दैनहामी सामग्री अपलोड गर्न वा भर्खरको पोस्ट हेर्न सक्दैनौं।
कसरी इन्स्टाग्राम मा अरु लाई अनफलो गर्ने
हामीसँग इन्टरनेट जडान छैन
यदि हामीले प्रमाणित गरेका छौं कि सर्वर समस्या छैन, हामी जाँच गर्नै पर्छ यदि समस्या हाम्रो उपकरण संग छ। पहिलो कुरा हामीले गर्नु पर्छ पत्ता लगाउनुहोस् यदि हामीसँग इन्टरनेट जडान छ, या त Wi-Fi को माध्यम बाट वा मोबाइल डाटा को उपयोग गरेर।
Wi-Fi जडान स्क्रीन को शीर्ष मा एक उल्टो त्रिकोण द्वारा प्रस्तुत गरीएको छ। यदि यो देखा पर्दैन भने यसको मतलब यो हो कि हामी एक Wi-Fi नेटवर्क संग जोडिएको छैन, त्यसैले यदि हामी मोबाइल डाटा छैन, हामी कहिल्यै प्लेटफर्म मा फोटो अपलोड गर्न सक्षम हुनेछैनौं।
यदि हामी मोबाइल डाटा छ जाँच गर्न को लागी (जब सम्म हामी हाम्रो दर समाप्त गरीएको छैन), हामी शब्दहरु ३ जी, ४ जी वा ५ जी कवरेज स्तर को लागी अर्को देखाइएको छ कि छैन जाँच गर्नुपर्छ। यदि त्यस्तो छैन भने, हामीसँग इन्टरनेट जडान छैनत्यो हो, हामी मोबाइल डाटा छैन, त्यसैले हामी इन्टरनेट मा फोटो अपलोड गर्न सक्दैनौं।
कसरी इन्स्टाग्राम कथाहरू अनलाइन हेर्न
इन्टरनेट जडान गरीब छ
यदि छविहरु अपलोड गर्न को लागी एक लामो समय लाग्छ वा आवेदन एक लोड त्रुटि फर्काउँछ, यदि हामी एक इन्टरनेट जडान छ, यो सम्भव छ कि हाम्रो मोबाइल उपकरण पुग्ने संकेत धेरै कमजोर छ र गति धेरै कम छ।
यदि Wi-Fi संकेत र मोबाइल उपकरण को स्तर हाम्रो उपकरण सम्म पुग्न को लागी कमजोर छ, हामी Wi-Fi संकेत को पट्टी को संख्या र मोबाइल कवरेज को पट्टी को संख्या मा हेर्नु पर्छ। यदि बारहरुको संख्या १ वा २ छ, हामी एक बिट वरपर सार्दै यो समस्या को समाधान गर्न सक्छौं।
यो याद राख्नु पर्छ कि पर्खालहरु र / वा बिजुली उपकरणहरु को अतिरिक्त पर्खालहरु उनीहरु ताररहित संकेतहरु संग मिलेनन्, त्यसैले स्थिति परिवर्तन गरेर, हामी चाँडै समस्या को समाधान गर्नेछौं।
इन्स्टाग्राममा कसरी टाइमर वा काउन्टडाउन सेट गर्ने
बन्द र आवेदन फेरि खोल्नुहोस्
मोबाइल उपकरणहरु उपकरण मा मेमोरी को मात्रा मा निर्भर खुला अनुप्रयोगहरु को प्रबंधन को लागी जिम्मेवार छन्। तपाईसंग जति धेरै RAM छ, अधिक अनुप्रयोगहरु पृष्ठभूमि मा खुला रहन्छ (जुन पृष्ठभूमिमा चलिरहेको जस्तै छैन)।
यदि तपाइँ नियमित रूपमा इन्स्टाग्राम को उपयोग गर्नुहुन्छ, यो सम्भावना भन्दा धेरै छ कि अनुप्रयोग कहिल्यै पूर्ण रूप बाट बन्द हुनेछ, त्यसैले यदि यो परिचालन समस्या छ, यो फिड अपडेट गर्दैन वा यसले हामीलाई छविहरु अपलोड गर्न अनुमति दिदैन वा यो उनीहरुलाई अपलोड गर्न एक जीवनकाल लाग्छ। प्लेटफर्म, हामी आवेदन बन्द र यसलाई फेरि खोल्नु पर्छ।
नवीनतम संस्करण को लागी आवेदन अपडेट गर्नुहोस्
जे होस् यो सामान्य छैन, अवसरहरुमा, इन्स्टाग्राम एक नयाँ अपडेट, एक अपडेट आवश्यक छ यदि प्लेटफर्म को उपयोग गर्न को लागी सक्षम हुन को लागी, नयाँ अपडेट को लागी अनुप्रयोग को उपयोग लाई सीमित गर्न को लागी सक्षम हुन को लागी।
यदि हामी नवीनतम संस्करण छ जाँच गर्न को लागी, सब भन्दा छिटो तरीका प्ले स्टोर वा एप स्टोर र इन्स्टाग्राम को लागी खोज गर्न को लागी हो। यदि नयाँ अपडेट जारी गरिएको छ, खुला बटन प्रदर्शन को सट्टा, अपडेट प्रदर्शित हुनेछ।
तपाईंको पीसी वा मोबाइलमा इन्स्टाग्राम फोटोहरू कसरी डाउनलोड गर्ने
क्यास अर्को कारक हो कि मोबाइल अनुप्रयोगहरु को खराबी मा शामिल छ। अनुप्रयोग क्यास अनुप्रयोग डाटा हो कि यन्त्र मा भण्डारण गरीएको छ ताकि यो छविहरु र पाठहरु लाई लोड गर्दछ जुन सामान्यतया अधिक छिटो दोहोरिन्छ।
यस तरीकाले, न केवल अनुप्रयोग को इन्टरनेट को खपत कम छ, तर यो पनि, फीड को लोडिंग मात्र नयाँ डाटा, प्लेटफर्म मा सबै डाटा को लागी सीमित छैन।
यदि अनुप्रयोग लाई छविहरु लोड गर्दा समस्या छ, यदि हामीले माथी प्रस्ताव गरीएको समाधान को कुनै पनी काम गरेको छ, हामी क्यास खाली गर्नु पर्छ र पुन: प्रयास गर्नु पर्छ।
जबकि आईओएस एन्ड्रोइड मा स्वचालित रूप बाट समय समयमा क्यास खाली गर्न को लागी (प्रयोगकर्ता लाई यो मेटाउन बाट रोक्न) को प्रभारी हो हामी मैन्युअल रूप बाट यो प्रक्रिया गर्न सक्छौं। एन्ड्रोइड मा क्यास खाली गर्न को लागी, हामी आवेदन को गुणहरु को उपयोग गर्न को लागी र बटन मा क्लिक गर्नु पर्छ क्यास खाली गर्नुहोस्.
वेब संस्करण प्रयोग गर्नुहोस्
यदि माथिको विधिहरु को प्रयास पछि, आवेदन अझै पनी काम गर्दैन, हामी हाम्रो ब्राउजर बाट वेब संस्करण को माध्यम बाट परीक्षण गर्न सक्छौं। यद्यपि वेबसाइटले हामीलाई स्थापित अनुप्रयोग खोल्न आमन्त्रित गर्दछ, हामी वेब संस्करण बाट फोटो अपलोड गर्न को लागी प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्छ, एक वेब संस्करण हो कि हामीलाई मोबाइल अनुप्रयोग को रूप मा उही कार्यक्षमता प्रदान गर्दछ।
कम्प्युटि In मा, जहाँ मोबाइल उपकरणहरु मा आउँछ, कहिले काहिँ सरल समाधान छ उपकरण रिबुट गर्नुहोस्, बेतुका जस्तो लाग्न सक्छ। जब तपाइँ उपकरण पुन: सुरु गर्नुहुन्छ, अपरेटि system्ग सिस्टम स्क्र्याच बाट र पुन: सुरु हुन्छ प्रत्येक चीज यसको ठाउँमा.
मोबाइल उपकरणहरु को अपरेटि system सिस्टम को लागी डिजाइन गरीएको छ हप्ता सम्म सञ्चालनमा रहनुहोस् एक रिबुट को आवश्यकता बिना, यो एक नियमित आधार मा रिबुट गर्न को लागी दुख्दैन, खास गरी जब प्रदर्शन अनियमित प्राप्त गर्न को लागी शुरू हुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: मोबाइल फोरम » सामाजिक सञ्जालहरू » म इन्स्टाग्राम मा फोटो अपलोड गर्न सक्दिन: यो लोड रहन्छ, के गर्ने?
कसरी आईफोन र मिल्दो मोडेल मा एनएफसी सक्रिय गर्न को लागी
प्रिन्टरमा फोन कसरी जडान गर्ने